အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga အကူအညီ, Tips and Cheats
Pet Rescue Saga သညျ Facebook တှငျ ရှိနသေညျ – ထက်ပိုပြီး 10 လူသန်းနဲ့ချီပြီး ကစားနေပါပြီ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga Facebook မှာဂိမ်း.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga, Candy Crush Saga ထုတ်လုပ်သူများထံမှ & Farm Heroes Saga!
အဆင့်ကိုရှင်းလင်းရန်နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို မကောင်းသော Pet Snatchers များထံမှကယ်တင်ရန် တူညီသောအရောင်အတုံးနှစ်ခုနှင့်အထက်ကို ယှဉ်တွဲပါ! ရွေ့လျားမှုသည် အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သေချာစီစဉ်ပါ။. သင်၏ပဟေဠိစွမ်းရည်များထက် ပိုမိုပျော်စရာကောင်းသော ပိတ်ဆို့တားဆီးမှု နာရီများဖြင့် စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။ Candy Crush လှည့်စားမှုများ!
Pet Rescue Saga သညျ Facebook တှငျ ရှိနသေညျ
Puppy ၏လည်ပတ်မှုအပြီးတွင် ကံမကောင်းသည့်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရှိသည်။! Lady Catalina ကိုကူညီရန် ပူးပေါင်းပါ။! Sunny Fields Villa တို့ ပါဝင်သည်။:
-'Grand Piano Ballroom' အပိုင်းများကို ခံစားလိုက်ပါ။’ နှင့် 'လရောင်လသာဆောင်'! ဤအဆင့်သစ်များဖြင့်, အခုထက်တောင် ပိုနေပြီ။ 4600 ပျော်ရွှင်စရာအဆင့်များ 🙂
-နောက်ထပ်မစ်ရှင်များ, စိန်ခေါ်မှုများ, အံ့သြစရာများ!
လောလောဆယ်, ယခုအချိန်တွင် Facebook သည် ချက်ခြင်းပျော်စရာဂိမ်းများစွာကို ကစားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပလပ်ဖောင်းအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။.
လူမှုပလက်ဖောင်းသည် သုံးစွဲသူများအား ဖျော်ဖြေရေးဂိမ်းများကစားခြင်းကဲ့သို့ ခံစားနိုင်သည့် ခံစားချက်ကောင်းကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်။.
ရွေးချယ်စရာ ထိပ်တန်း Facebook ဂိမ်းသစ်များစွာ ရှိပါသည်။, သင်၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အရသာပေါ် မူတည်.
တိုက်ပွဲဂိမ်းများဖြစ်ပါစေ။, ပဟေဠိ, ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းများ, အားကစားဂိမ်းများ, အက်ရှင်ဂိမ်းများ, စသည်တို့, အားလုံးကို အမျိုးအစားခွဲထားပြီး သင့်တစ်နေ့တာအတွက် တကယ်ကို မိုက်ပါတယ်။.
ပြီးတော့ ဒီမှာ, Pet Rescue Saga ကစားခြင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။.
Filed Under: Facebook က
ဒီအဆင့်မှာတော့သင်ကကယ်တင်ဘို့အောက်ခြေလေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဆောင်ခဲ့နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်နေကြသည်များနှင့်ဝင်ငွေ 20 000 မှတ်, ဒီအဆင့်ကို မှလွဲ. သင်တို့နှင့်အတူအလုပျမှခြောက်လအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားပေးနေကြသည်ဒါကြောင့်လှည်ဖြစ်ပါသည်, ဝမ်းနည်းပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့, သငျသညျအစွန်းချွတ်နှစ်ခု drop နှင့်နေဆဲကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
ဒီအဆင့်အတွက်လုပ်ကွက်ရုံကြီးမြတ်ပေါင်းစပ်လုပ်တက် add dont အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, အဲဒီမှာ earnt ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမ firecracker သည်နှင့် ပတ်သက်. သာလျှင်ကောင်းသောသတင်းရွေ့လျား၏နံပါတ်မန့်သတ်ချက်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်.
သတ္တုသေတ္တာများ, လှောင်အိမ်များနှင့်ဖွင့်သော့ခတ်ကျောက်ဆောင်ဒီပြီးသားပူဟင်းမှအနည်းငယ်အမွှေးအကြိုင် add, ဗုံးသူတို့ကိုသင်မသုံးနိုင်ခင်လိုအပ်ရမ်းပြီးကြောင်းဖန်ကိစ္စများတွင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် (ကြီးမြတ်တဲ့စိတ်ကူး '' အဖြစ်ဖတ်ပါ, လုပ်သာလုပ်ပါ!'') ငါမှားနိုင်ရန်အတွက်ဒီလုပ်နေတကယ်သင်တို့မီးလြော့နိုင်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်သင့် rocks..yeah သော့ဖွင့်ရှေ့တော်၌ဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ဗုံးတပ်များမှ!
သငျသညျပွင့်လင်းလည်းကျိုးခဲ့သတဲ့ဗုံးတစ်ဝှမ်းကသင်၏သတ္တုသေတ္တာများကိုစုသိမ်းရန်ကြိုးစားနိုင်လျှင်, ဒီတစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့သူတို့ကိုဖျက်ဆီးကူညီပေးပါမည်. သင်သည်ထိုသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့နိုင်မည်အကြောင်းအခြားလမ်းထိပ်မှာတစ်ကော်လံသူတို့ကိုစွန့်ခွာတို့ကိုမျက်နှာပြင်ကျမ်းလိပ်အဖြစ်ကိုချွတ်ခေါက်ရပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ခုခုကဒီဖြစ်ပျက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နည်းတူသူတို့ကိုပေါ်မှာထိုင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်လေ့အတိုင်းဤလှည်သော်လည်းနိုင်ပါတယ်…သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အမှု၌ဖြစ်ပျက်သည့်အခါ, ငါသည်ဤအဆင့်ကိုကူးသွားဖို့ကြိုးစားနေချွတ်ဤမျှလောက်များစွာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပစ်ချခဲ့ကြ!
သို့သော်အားလုံးလှည်ဘုရင်ကဂိမ်းနဲ့တူပါကဖြစ်နိုင်! ကိုယ့်အရောင်များ၏လုပ်ကွက်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ရွေ့လျားကိုရှေးခယျြ, လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာအကျိုးဆက်ရှိပါတယ်သတိရ, ပိုပြီးပေါင်းစပ်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုထွက်ရှာဖွေနောက်ဆုံးမှာဒီဂိမ်းဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းနှင့်အတူ, ကံတွေအများကြီးနဲ့သင်ကထွက် Nut နိုင်ပါလိမ့်မယ်မဟာဗျူဟာမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်!
Filed Under: level 69, Uncategorized Tagged: ကူညီပါ, level 69
"ငါအရူးအမူးသကြားလုံးနှင့်အလှည့်ပတ်ပစ်သစ်တော်သီး, If I wanted to rescue pets I'd head to an animal shelter" ကောင်းစွာငါငါကလည်းတစ်ချိန်ကရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်ကြဘူးတစ်ခုခုခဲ့ကြောင်း. If you've ever embarked uponaKing adventure then you may have some idea what you are in … [Continue reading]
သငျသညျပေကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အများဆုံးနေရာလေးကို tools တွေနဲ့တ Firecracker ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ညာဘက်ကိုကြည့်လျှင်သင်လိုအပ်ချက်အချက်များနှင့်အတူတိုက်ကျွေးခံရဖို့တစ်နည်းနည်းမီတာတှေ့လိမျ့မညျ, အဆိုပါပေါင်းစပ်ဟာပိုကောင်းပိုကြီး. Fill this meter by … [Continue reading]
Filed Under: Game, ကူညီပါ Tagged: Firecrackers
If you've committed to the Pet rescue voyage here areafew hints, သင့်ရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သင်သည်ကူညီရန်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်! သငျသညျအနညျးငယျမေတ္တာတော်ကိုလိုလျှင်သင်အနည်းငယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးရန်ရှိသည်! - Spending the time to send your friends lives every time you log in (ora… [Continue reading]
Filed Under: Game, ကူညီပါ Tagged: သဲလွန်စ, အကြံပေးချက်များ, လှည့်ကွက်
ဒါကြောင့်ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူတိုင်းမကဤဂိမ်း၏ပရိတ်သတ်ကြောင်းထွက်နေသေးတယ်ခဲ့ကြပေမည်, ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့အရှုံး! Problem is many 'anti-gamers' enjoyagood old whinge but there are ways you can keep your appetite for lives and helping hands happily fed and the wingers … [Continue reading]
အဆင့်ဒါ 27 သဘောရိုးအလုံအလောက်ချွတ်စတင်သည်, albeitalittle 'Matrix' with the suspended blocks. Boot တက်မှကယ်တင်နိုင်ခဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏မှန်ကန်သောနံပါတ်နှင့်ကြယ်တစ်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူဤအဆင့်တဆင့်ရတဲ့အတှကျအနည်းငယ်နေရာလေးကိုအရိပ်အမြွက်နှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါတယ်! First … [Continue reading]
Filed Under: level 27, Uncategorized Tagged: ကူညီပါ, level 27, အကြံပေးချက်များ
ငါ၏အ Oh, ဒီချိုမြိန်နည်းနည်းဂိမ်းသည်နောက်ကျမဟုတ်ဘဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆည်းပူးခဲ့ပါသည်! ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရည်ရွယ်ချက်ဘုရင် developer များလာမည့်ဤသူတို့သည်ဆင်းရဲသားကံဆိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ store မှာဘာ? level 59 အပြစ်မရှိသောသူ၏ရှာဖွေနေအဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်, the pets actually getabreak on this one as … [Continue reading]
Filed Under: level 59 Tagged: ခိုင်မာသော, level 59
ကောင်းပြီငါအဆင့်ကိုကျော်ပက်လက်ပါပြီသူငယ်ချင်းပုံအားဖြင့်စီရင်တော် 29 marker I'm going to makeajudgement call and say itsatricky one. ရှင်းလင်းခြင်းတစ်ခုရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ 99% အဆိုပါလုပ်ကွက်များနှင့်ဝင်ငွေ၏ 16 000 points I'm having flashbacks and remembering … [Continue reading]
Filed Under: ကူညီပါ, level 29 Tagged: level 29
Now don't freak out! level 43 ခြိမ်းခြောက်ရူပသို့သော်၎င်း၏အားလုံးဖြီး, သငျသညျသိရှေ့၌သင်တို့နည်းနည်း fishies အန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မည်! ဒီမှာနှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်များလေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကယ်ဖို့ရှိပါတယ် (ငါးသငျသညျအရအားလုံးများမှာ) နှင့်တစ်နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေ 24 000 မှတ်, ကိတ်မုန့်၏ peice! … [Continue reading]